Nezvedu - Hebei Jinqu Metal Zvigadzirwa Co., Ltd.
Kunze kwekambi grill grill mesh
Hebei Jinqu Metal Zvigadzirwa Kambani Ltd. yakavambwa muna 2005 gore muAnping County. Iyo kambani inovhara nzvimbo inosvika zviuru makumi matatu zvemamiriyoni, inosanganisira ina maworkshop ekugadzira, maviri ekuchengetera uye musangano wekuongorora.
Mainjiniya edu ane anopfuura makore gumi 'ruzivo uye isu tinogamuchira OEM uye Customization.
Mutengo Auditor anonyatso kudzora mutengo uye anovimbisa mutengi wese anogona kuwana zvawakabhadhara.
Tiri nyanzvi waya pajira riya kugadzira uye kwekurasira. Mazimbe grill mesh ndechimwe chezvinhu zvedu zvikuru zvigadzirwa.
Uye Inogona kuraswa bhengi grill mesh inogamuchirwa kwazvo mumusika weJapan, Korea, Malaysia, Singapore, Australia zvichingodaro.
Iyo BBQ grill mesh zuva nezuva zvinobuda zvidimbu mazana matatu. Yakajairwa kuJapan kune gumi nemaviri midziyo pamwedzi.
Isu tine kugona kukupa iwe yemhando yepamusoro BBQ grill waya mesh nemutengo wefekitori uye nekukurumidza kutumira.
Isu takatambanudza yedu yekugadzira mutsara uye yekucheka mesh inosanganisira isina simbi grill mesh, Round bbq grill mesh, Square barbecue mesh, Grill net nemabato, Grill mesh kabati, Japan inoraswa grill waya mesh, Korea inoraswa grill mesh.
Chinangwa chedu ndechekupa akanakisa emasevhisi edu nekuzvipira kwakazara uye nekuvimbika tichichengetedza zviyero zvepamusoro zvehunhu uye mashandiro, kupa mhinduro itsva uye inoshanda bhizinesi mhinduro iyo inotibatsirawo isu kutungamira nekuzvipira kupfuudza zvinotarisirwa nevatengi vedu, kugadzira mamiriro ekushanda akachengeteka uye akachengeteka evashandi vedu vane mikana yakawedzerwa yekuvabatsira kukura nekambani.
Tine chivimbo chekuti nerutsigiro rwevose vatinoshanda navo nevatengi uye nekuenderera mberi nekutsungirira uye kuzvipira kwevanhu vedu, zvese zvatichaedza kuita mune ramangwana zvicharamba zvichibudirira.
Chengeta uye kusimudzira yedu yechiratidzo pesvedzero muGrill waya mesh munda.
Mutengo wakaenzana kukosha uye sevhisi inowedzera kukosha, tinoita kuti vatengi vakunde-kukunda mamiriro.
1) Iine anopfuura makore gumi neshanu 'waya wepasi kugadzira
2) Nyanzvi Yekutengesa Chikwata.
3) Yakakwana mushure-yekutengesa sevhisi
4) Ane ruzivo mainjiniya uye mushandi ane hunyanzvi
5) Kutendeseka uye mutoro
6) Chigadzirwa kuongorora usati wasununguka.
7) Fekitori yedu iri padhuze kurodha chiteshi, zviri nyore kwazvo kutumira.
8) Chitupa che ISO9001, SGS uye yechitatu bato bvunzo